Barcode Ọkachamara + na-enye anyị ohere ịmepụta barcodes omenala | Esi m mac
Koodu mmanya aghọwo ngwa dị mkpa ọ bụghị naanị ma a bịa n'inye ihe ederede banyere ngwaahịa, mana ọ na-enye anyị ohere iji ha jikwaa nchekwa data. Koodu ọ bụla bụ ụzọ nke na-anọchite anya ozi, cdị ka a ga - asị na ọ bụ mkpụrụedemede nke nọchiri anya nọmba ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ anyị nwekwara ike ịchọta akara ngosi ebe ejiri mkpụrụedemede na akara akara mee ihe. Okpukpo nke ogwe ndị mejupụtara koodu mmanya yana oghere dị n’agbata ogwe dị iche iche nke mejupụtara ya na-arụ ọrụ dị mkpa n’inweta ozi.
Ọ bụrụ na anyị achọpụta na anyị nwere mkpa ịmepụta akara dị iche iche, anyị nwere ike iji ngwa dị iche iche n'efu dị na availablentanetị, ma ọ bụ ọrụ weebụ nke na-enyekwa anyị ohere ahụ. Nsogbu bụ na mgbe ụfọdụ, ọrụ weebụ ma ọ bụ ngwa ndị a na-enye n'efu na-enye anyị njedebe mgbe a bịara n'ịmepụta Koodu dịka mkpa anyị. Nke a bụ ebe ọ na-abata Barcode Wizard +, ngwa nke nwere ọnụahịa oge niile na Mac App Store nke 9,99 euro, ma na obere oge, enwere ike ibudata ya n'efu site na njikọ m hapụrụ na njedebe nke isiokwu ahụ. Dika oge mbipute edemede a abughi nke m dere ya, apughi m ekwe m nkwa na mgbe ebiputara ya, o ga na adiri n'efu.
Ọkachamara Barcode + ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ịmepụta barcodes omenala, kamakwa ọ na-enye anyị ohere ibipụta ha na aha mmado yana ikwe ka anyị mata ha site na onyogho dị mfe. Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa ebe ịchọrọ iji barcodes, nke a bụ ngwa gị, ngwa nke na-enye anyị ohere ijikwa ihe niile metụtara barcode, njirimara barcode, mbipụta ...
Koodu mmanya nke Barcode Wizard na-akwado
Ogwe 39/3 nke 9
Ogwe 39 EXT
Ngwa 11 / USD-8
Koodu 93 EXT
ISBN-13 / Ogwe akwụkwọ ozi
Barcode Ọkachamara +14,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Barcode Ọkachamara + na-enye anyị ohere ịmepụta barcode omenala